IMotsepe Foundation icacisa ngomnikelo kaR150 000 wamaRoma aKhatholika – Sivubela intuthuko Newspaper
IMotsepe Foundation icacisa ngomnikelo kaR150 000 wamaRoma aKhatholika
ABEMOTSEPE Foundation bangenelele ukubhula umlilo obufuna ukuhlukanisa ibandla lamaRoma aKhatholika iSt Augustine’s Parish KwaMachibisa eMgungundlovu ngokungacaci komnikelo kaR150 000 owakhishwa yile nhlangano owawuzothuthukisa isakhiwo saleli bandla.
NgoFebruary-2018 kwaba nendumezulu yomcimbi eMgungundlovu weminikelo kaR150 000 eyayamukelwa ngamabandla ezenkolo nezikole ezazikhethiwe zaseMgungundlovu ukhishwa nguDkt Patrice Motsepe ehambisana nowakwakhe uDkt Precious Moloi.
Abazalwane baseSt Augustine bangabanye abahlomula ngalo mnikelo njengoba nabo babefake isicelo kule nhlangano. Ngokuhamba kwesikhathi babe sebethimula besola ukuthi hleze le mali yehla ngemilenze yabantu abathile njengoba kuthiwa selokhu yamukelwa bekungakaze kubonakele ukuthi seyenzeni futhi kungekho ncazelo evelayo ngokusebenza kwayo.
UMnu Mampe Magampa oyi-project co-ordinator yeMotsepe Foundation weluleke laba bazalwane ethi mabehlise iminoya ngoba imali yonke ikhishwa yibona ngakho kayikho edliwe. Uthe basanikeze ibandla imali enguR75000 elaliwucelile ukufakelwa kwama-air conditioner. “Lapha eMotsepe Foundation kasinikezi umuntu siqu imali kodwa uyahamba ayokwenza i-quotation yalokho okusuke kudingeka bese sikhokhela loyo ozobe elekelela ekufakeni kumbe ekuletheni lokho okudingekayo. Nalaphaya eSt Augustine kayikho imali enikezwe umuntu siqu sakhe kodwa imali siyidlulisele kwinkampani okuyiyona ezobafakela ama-air conditioner. Kuyimanje kenesamba sikaR75000 esisasibambile esizophuma uma sekufakwe ama-air conditioner. Sesitholile ukuthi into ebambezele ukufakwa kwawo yingoba kusamele kwengezwe amandla kagesi njengobal olu hlobo lwama-air conditioner oluzofakwa ludinga amandla amaningi kagesi,” kusho uMnu Magampa.UNkk Thembi Majozi ongunobhala wesigungu esidala esamukela isheke leMotsepe Foundation uthe konke okwakucelwe ngabazalwane kuzokwenzeka kakushintshe lutho. Uthe imali isenjengoba injalo kayikho lapho incuzwe khona. Uthembise ukuthi kuzothi kuphela uFebruary kuzobe sekukhona okungumnyakazo wokufakelwa kwama-air conditioner.
UHlomuka ukhuthaze ukuphepha kwabafundi nothisha esimweni sezulu